राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २२ अर्ब मात्र खर्च | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा २२ अर्ब मात्र खर्च
on: March 06, 2019 मुख्य खबर, विकास
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रू. ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ती आयोजनामा विनियोजित बजेटको यो २४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकांश आयोजनाको अवस्था सारभूत रूपमा प्रभावकारी नभएको अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाले गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति देखिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा रहेका मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि रू. ८ अर्ब थप निकासा दिइएको पनि अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले २२ ओटा विकास आयोजनालाई ८ वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखी बजेट विनियोजन र कर्मचारी परिचालनमा तिनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । ती आयोजनाले झेल्ने समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन र मूल्यांकन बैठक समेत हुँदै आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारलाई समेटी २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रका रूखको कटानमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको दाबी गरिएको छ । ठेकेदारको फितलो अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रिया, श्रमिक कामदार तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव पनि आयोजनाको समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको मोडालिटीमा स्पष्ट हुन नसक्नु र निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजना सम्पन्न हुने समय सीमा यकिन हुन नसक्नु पनि आयोजनाको समस्याको रूपमा छ ।
समस्या समाधान गर्न आयोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापको नतीजा मापन गर्न स्पष्ट मानक र प्रतिफल सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने समीक्षा गरिएको छ । आयोजना प्रमुखहरूको कार्य सम्पादनलाई निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्ने कार्य गर्नुपर्ने पनि समीक्षा गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनका लागि अधिक मूल्यांकन गर्ने र मालपोतको रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यांकन हुने हुँदा आयोजनाका लागि मूल्यांकन गर्दा मालपोतलाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दिइएको छ ।
केही पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजनाको समीक्षा
पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्ला र २१५ बस्ती जोड्ने लक्ष्य लिएको मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि चालू आवमा ५ अर्ब ५५ करोड २ लाख बजेट विनियोजन भई समीक्षा अवधिसम्ममा ३ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । यो अवधिमा ७१ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा २५ किमी सडक कालोपत्र, ३० किमी ग्राभेल, ४६ किमी ट्र्याक खोल्ने काम र १४ ओटा पुल निर्माण भएका छन् ।
ठेकेदार भागेपछि अलपत्र परेको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समीक्षा अवधिमा खर्च पनि निराशाजनक छ । दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०५५÷५६ सालदेखि थालिएको यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत छ । यस आयोजनाका लागि चालू आवमा ७ अर्ब ६ करोड ५९ लखा रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा २० दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालू आवमा कुल विनियोजनको ६ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बाँके जिल्लाको राप्ती नदीमा ३१७ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी ४२ हजार हेक्टर जमीन सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा यस वर्ष कुल विनियोजनको २९ दशमलव प्रगति देखिएको छ । गत आवमा सोही अवधिमा २८ दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आयोजना शुरू गर्दा अनुमानित लागत रू. १२ अर्व ८० करोड रहेकोमा हाल २५ अर्ब २ करोड पुगिसकेको छ ।
कर्णाली नदीबाट परम्परागत प्रणालीमा सञ्चालित रानीजमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने र सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको यो आयोजनामा पनि प्रगति सुस्त छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महीनामा ३८ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालू आवको समीक्षा अवधिमा कुल विनियोजनको ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र भएको छ । हालसम्ममा यो आयोजनाअन्तर्गतको चिसापानीमा इन्टेक तथा लिंक क्यानल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
भेरी–बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना
बर्दिया र बाँके जिल्लाका करीब ५१ हजार हेक्टर जमीनमा बाह्रै महीना सिँचाइ र ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनामा समीक्षा अवधिमा २९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा रू. ६ अर्ब ९ करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ अर्ब ७९ करोड २७ लाख खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६२ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको ६ महीनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको ४९ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आवमा रू. ६ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएकोमा रू. ३ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ ।
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
यस आयोजनाका लागि चालू आवमा रू. १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू. ३० करोड खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा शून्य खर्च रहेकोमा चालू आवमा २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ११० बिगाहा जग्गा अधिग्रहणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धितलाई मुआब्जा दिने कार्य आरम्भ भएकोमा ६५ बिगाहा जग्गाको अधिग्रहण भएको बताइएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल
७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको यो विमानस्थलको रनवे, ट्याक्सी वेको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र टर्मिनल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । चालू अवमा यस विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणसमेतको विमानस्थल निर्माणका लागि रू. ६ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा रू. १० करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।